कात्तिक २९, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड रू. १ करोड ७८ लाख १ हजार घाटामा रहेको छ । गत वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म आयोजना रू. १ करोड ३० लाख ५५ हजार घाटामा रहेको थियो । गत वर्षको भन्दा यो वर्ष आयोजना बढी घाटामा रहेको हो ।
४५६ मेगावाट क्षमताको अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड विविध कारणले गर्दा अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन् । विद्युत् विक्रीबाट आम्दानी शुरु हुन नसकेकाले आयोजनाले घाटा सहनु परेको बताएको छ ।
यस वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मार्फत नेपाल सरकारको रू. १२ अर्ब दिर्घकालिन ऋण प्राप्त गरेको आयोजनाले नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानबाट पहिलो त्रैमाससम्म रू. १३ अर्ब ऋण प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ ।
गत वर्ष पहिलो त्रैमाससम्म रू. ८ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख १३ हजार रहेको आयोजनाको कुल दायित्व रकम यस वर्ष सोही अवधिसम्ममा रू. ५ अर्ब १४ करोड ५१ लाख ६७ हजार रहेको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष आयोजनाको दायित्व रकम घटेको छ । त्यस्तै गत वर्ष रू. ७१ अर्ब २८ करोड ७९ लाख ८० हजार रहेको कुल सम्पत्ति यस वर्ष बढेर रू. ७९ अर्ब ९५ करोड ८४ लाख ८६ हजार पुगेको छ ।
हाल आयोजनाको चुक्तापूँजी रू. १० अर्ब ५९ करोड रहेको छ । रिटर्न अनिङ शिर्षकमा आयोजनाले यो वर्ष रू. ७१ करोड ९३ लाख ५३ हजार छुट्याएको छ । गत वर्ष यो शिर्षकमा रू. ६५ करोड ३५ लाख ८० हजार थियो ।
घाटामा रहेको उक्त आयोजनाको प्रतिशेयर आम्दानी पनि रू. शून्य दशमलव १७ ऋणात्मक रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. ९३ दशमलव २१ रहेको छ ।